Folder.exe virus - MYSTERY ZILLION
မူလ › Daily Life › Antivirus & Virus ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း မင်္ဂလာပါ!
mr.zayzay March 2011 edited April 2011 in Antivirus & Virus ကျွန်တော့်စက်တွေမှာ.. folder.exe virus တွေ တော်တော်ပွားနေလို့.. လုပ်ပါဦး... AVG နဲ့သတ်တာ... ခဏပဲ.. ပြန်ပြန်ပြီး၀င်နေလို့.. ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ.. မသိဘူးဗျ.. ပြောပေးကြပါဦး.... MZ မှ... ညီအစ်ကိုများ... မှတ်ချက်များ
aungkyawzeya March 2011 edited March 2011 Registered Users mr.zayzay;84748 said:ကျွန်တော့်စက်တွေမှာ.. folder.exe virus တွေ တော်တော်ပွားနေလို့.. လုပ်ပါဦး... AVG နဲ့သတ်တာ... ခဏပဲ.. ပြန်ပြန်ပြီး၀င်နေလို့.. ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ.. မသိဘူးဗျ.. ပြောပေးကြပါဦး.... MZ မှ... ညီအစ်ကိုများ...
ဒီပာာ[HTML]http://dlpro.antivir.com/package/removaltool/win32/en/removaltool-win32-en.exe[/HTML]ကို Download ဆွဲပြီး Stick ထဲမှာသိမ်းပါ။ပြီးရင် Infection ဖြစ်နေတဲ.စက်မှာတပ်ပါ။ပြီးရင် Safe mood နဲ. Windows တက်ပြီးအဲ.ကောင်ကို Run လိုက်ပါ။Ok ပါလိမ်.မယ်၊ မOk တော.လဲနောက်တစ်နည်းကြံကြတာပေါ.ဗျာ။ :tongue: mr.zayzay March 2011 edited March 2011 Registered Users Thanksalot brother. I have to try. mr.zayzay March 2011 edited March 2011 Registered Users How to do Folder.exe virus effect in Window 98. How can I do that. Could me advise all MZ brothers.:mad: aungkyawzeya March 2011 edited March 2011 Registered Users I think it can also be used for Windows 98 Operating System. Please just try it first. wityee April 2011 edited April 2011 Registered Users aungkyawzeya;84750 said:ဒီပာာ[HTML]http://dlpro.antivir.com/package/removaltool/win32/en/removaltool-win32-en.exe[/HTML]ကို Download ဆွဲပြီး Stick ထဲမှာသိမ်းပါ။ပြီးရင် Infection ဖြစ်နေတဲ.စက်မှာတပ်ပါ။ပြီးရင် Safe mood နဲ. Windows တက်ပြီးအဲ.ကောင်ကို Run လိုက်ပါ။Ok ပါလိမ်.မယ်၊ မOk တော.လဲနောက်တစ်နည်းကြံကြတာပေါ.ဗျာ။ :tongue:
ခုတော့မဖြစ်သေးပါဘူး နောက်ဖြစ်လာခဲ့၇င် ဆိုပြီး ဒေါင်းထားလိုက်ပါတယ် ကျေးဇူးပါ... နောက်လဲ အသိပညာတွေတိုးပြိး များများဖြေပေးနိုင်ပါစေ....:smile: kyi April 2011 edited April 2011 Registered Users အကိုရေ folder.exe ဆိုတာ folder nameကို exe ပြောင်းပြီး အဲဒီfolderထဲမှာ၀င်နေတာလားကျွန်တော်.စက်မှာလည်း အဲလိုဖြစ်နေလို. folderတိုင်းမှာအဲဒီexeတွေ၀င်နေတာလေ...ဘာမှလုပ်မရဘူး kasperနဲ.လည်းသတ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်.. စက်ကြီးလည််း အရမး်လေးသွားတယ်..အကိုအောင်ကျော်ဇေယျပြောသလိုပဲ အခုလုပ်ကြည်.လိုက်ပါအုံးမယ်...ကူညီကြပါ ..ကူညီကြပါနော်စက်ကို virus ကိုက်တာလောက်စိတ်ညစ်တာမရှိဘူးထမင်းတောင်မစားနိူင်ဘူး...အဟင်. ( ကော်ဖီသောက်တာများသွားလို.) K April 2011 edited April 2011 Moderators folder.exe ဆိုတာ folder nameကို exe ပြောင်းပြီး အဲဒီfolderထဲမှာ၀င်နေတာလား
မဟုတ်ပါဘူး။ Folder ကို Hidden လုပ်ထားပြီးတော့ Folder Name အတိုင်း .exe တွေလုပ်ပစ်တာပါ။ Extension မဖော်ထားရင် အလွယ်တကူမသိနိုင်ပါဘူး။msconfig ကို၀င်ပြီးတော့ မသိတဲ့ Startup တွေ Services တွေပိတ်ထားပေးပါ။ :smile::smile: honeyktzs June 2011 Registered Users why don't kill with cmd? I think this virus is easy to kill from cmd. i wanna tell exacltly but my computer isn't use myanmar font. somebody know that, i apologize.. !!!! :-( heinnyinyiwin July 2011 edited July 2011 Registered Users Avira ကကောင်းကောင်းနိုင်ပါတယ်။<p.s. ko @heinnyinyiwin , pls in Unicode. Burglish isn't allowed in MZ. Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla